Wararka Maanta: Sabti, Jan 12, 2013-Faahfaahin ku saabsan iska-horimaad ciidammo Faransiis ah iyo Xoogagga Al-shabaab ku dhexmaray Deegaanka Buulo-Mareer
Wasaaradda gaashaandhigga Faransiiska ayaa sheegtay in laba ka mid ah ciidamadooda komaandooska iyo la haystihii ay doonayeen inay soo furtaan ay kaga dhinteen weerarkaas, sidoo kalena ay ku dileen 17 dagaalyahan oo ka tirsan Al-shabaab.
Lix qof oo shacab ah ayaa sidoo kale ku dhintay dagaalkaas, kuwaas oo la sheegay inay ku jireen haweeney uur leh, cunug yar iyo nin oday ah, iyadoo la sheegay inay dadkaas toogteen ciidamadii dhulka ka dagaalamayay ee Faransiiska ahaa.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in Dennis Allex ay dileen xubno ka tirsan Al-shabaab intii uu dagaalku socday, balse Al-shabaab ayaa sheegtay inay weli gacanta ku hayaan Allex oo nool ayna saxaafadda u soo bandhigi dooonaan marka ay nabaddu u saamaxdo.
Al-shabaab kama aysan hadlin khasaaraha dhankooda kasoo gaaray dagaalka, iyadoo xaaladda degmada ay caadi kusoo laabatay maanta baqadii dina loo furay ganacsiga.
"Xaaladdu hadda waa deggen tahay, waxaase magaalada ka buuxa ciidammo Al-shabaab ah oo wata gaadiid dagaal, dadkuna waxay inta badan isweydiinayaan wixii dhacay," ayuu yiri Cumar Cali oo ka mid ah dadka ku nool deegaanka oo HOL la hadlay.
Goobjoogayaal kale ayaa sheegay inay arkeen maydka askari ka mid ah askartii Faransiiska ee lagu dilay weerarkii xalay, ayna Al-shabaab u sheegeen dadka deegaankaas inay soo bandhigi doonaan askartii ay ku dileen weerarkaas.
Saldghiggii Al-shabaab ee weerarka lagu qaaday ayaa gabi ahaan la burburiyay, waxaana weerarkan uu uu ahaa kii ugu horreeyay oo ay Faransiisku ku qaado saldhig ay Al-shabaab ku leeyihiin Soomaaliya.